#NABShow 2017: ထုတ်လုပ်သူ Spotlight: Blackmagic Design မှ NAB News! | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » #NABShow 2017: ထုတ်လုပ်သူ Spotlight ကို: Blackmagic ဒီဇိုင်းထံမှ NAB သတင်းများ!
အဆိုပါ #NABShow 2017 ထုတ်လုပ်သူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်ထုတ်ကုန် updates များကိုအတူထုပ်ပိုးထားသည်။ Blackmagic ဒီဇိုင်း အရှင်နေ့အဘို့ထိုသူတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်သူ Spotlight ကိုအောင် shared ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်အချို့သိသိသာသာသတင်းရှိပါတယ်!
အဆိုပါအများကြီးမျှော်လင့်များလွှတ်ပေးရေး DaVinci 14 ဖြေရှင်း ပို့စ်ထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာအနှံ့လှိုင်းတံပိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ် features တွေကြောင့် DaVinci ၏ယခင်ဗားရှင်း 10 အဆအားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်တိုးတက်မှုဖြေရှင်းပါဝင်သည်! အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကအသံ post ကိုထုတ်လုပ်မှု suite ကို DaVinci 14 Fairlight နှင့်အတူအဖျားခတ်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်အဘို့အပေး Multi-user ကပူးပေါင်းကိရိယာများ, အရောင်အဘို့ကိုထောက်ပံ့ပေးဖြေရှင်းခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအတူတူပင်စီမံကိနျးအတှကျမျိုးစုံစနစ်များထဲကနေအသံရောထွေးရှိပါတယ်! Blackmagic ဒီဇိုင်း DaVinci (အားလုံးလက်ရှိ DaVinci ဖြေရှင်းရန်နှင့် DaVinci စတူဒီယိုဖောက်သည်များအတွက်) အများပြည်သူ beta ကိုအဖြစ် 14 ဖြေရှင်းခံရတော့မညျဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်အခမဲ့ကြိုးစားနိုင်! (သင့်ဗားရှင်းအတွက်) ဤတွင်နှိပ်ပါ www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve
"DaVinci ဖြေရှင်းရန်၏လွှမ်းမိုးသောအောင်မြင်မှုမယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ "ဒါဟာကမ္ဘာ့အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာတည်းဖြတ်မှုစနစ်ဖြစ်လာသည်နှင့်ယခုကျွန်တော် 14 ဖြေရှင်း DaVinci နှင့်အတူလာမည့်အဆင့်အထိကယူပြီးဖွင့် Grant ကအသေးသုံးငွေ, CEO ဖြစ်သူကပြောပါတယ်, Blackmagic ဒီဇိုင်း. "ဒီဗားရှင်းသစ်နှင့်အတူကျနော်တို့အနေနဲ့ incremental update ကိုကျင့်ချင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်ကြီးမားတဲ့ခုန်စေနှင့်အသစ်မြေပြင်ကိုချိုးဖျက်ချင်တယ်။ ဒီမှာမှာမြေတပြင်လုံးအင်ဂျင်နီယာအသင်းအတွက်လည်းပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်င် Blackmagic ဒီဇိုင်း! ကျနော်တို့အယ်ဒီတာများ switching နေကြသည်ကျနော်တို့အသံအင်ဂျင်နီယာများ၏မျိုးဆက်သစ်စက်မှုလုပ်ငန်းဝင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်ဘယ်လောက်လျင်မြန်စွာအကြောင်းကိုတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြသည်။ အတူတူကျနော်တို့ကကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးတည်းဖြတ်, အရောင်ဆုံးမခြင်းနှင့်ယခုအသံဖိုင် software ကိုအောင်ဆက်လက်အားလုံးအလုပ်လုပ်နိုင်! "
သစ်များ၏ကြေငြာချက် ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို Pro ကို HD အရာ 8 သွင်းအားစု, Multi-viewer, aux နှင့် features Program ကိုလက်ငင်း, Analog စအသံသွင်းအားစု, built-in ဆွေးနွေးချက်-နောက်ကျောနှစ်ခု flash ကိုမီဒီယာပလေယာ, DVE နှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီးတိတိကျကျရုပ်မြင်သံကြားများအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့် AV စနစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နေပါသည်! အဆိုပါ ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို Pro ကို HD အားလုံး SD ကနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီး HD 1080p60 မှတက်ကို formats အပေါင်းက SDI ဖြစ်စေသင့်ဝင်လာသောကင်မရာအချက်ပြမှုများကိုရောမွှေနှင့်ကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်ဆုကြေးငွေကဆက်ပြောသည်, HDMI, သင့် CPU ကိုသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်း console ကနေတောင်မှတိုက်ရိုက်သွင်းအားစု!
ဘက်ပေါင်းစုံခလုတ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဟာ့ဒ်ဝဲ control panel ကိုထုတ်လွှင့်။
4 x ကို 3G-SDI နှင့်4က x HDMI အားလုံးအလိုအလျောက်ပြန်လည်ချိန်ကိုက်မှုနှင့်အတူ 8 သွင်းအားစု၏စုစုပေါင်းသွင်းအားစု။
SD ကထဲကနေ 720p, 1080i နှင့် 1080p အားလုံးကိုဗီဒီယိုအမျိုးအစားကို support HD 60fps မှတက်။
1 ပေါင်းစုံ 8 သတင်းရင်းမြစ်များအတွက်အမြင်အဖြစ် preview ကိုများနှင့်အစီအစဉ်တွင် built X ။
20 RGBA တစျခုခုအတှကျမီဒီယာရေကူးကန်ဂရပ်ဖစ်သိုလှောင်မှုအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
နယ်စပ်နှင့်အတူ DVE built-in များနှင့်အရိပ် drop ။
အကူးအပြောင်း, ဖြတ်ရောမွှေ, ကျဆင်းလာပါဝင်သည်, SMPTE Wipe နှင့်ပိုပြီး။
chroma keyer ပေါင်း 1 မြစ်အောက်ပိုင်း keyers အပါအဝင်2အထက် keyer ။
ကြည့်ဘို့ aux switching ခလုတ်နဲ့ LCD မျက်နှာပြင်နှင့်အတူအရန် output ကို 1 ။
အားလုံးဗီဒီယိုကိုသွင်းအားစုများနှင့်လွတ်လပ်သောအသံသွင်းအားစုထဲကနေအသံ embedded အသံရောနှောတိုက်ရိုက်ရောသမမွှေများအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ဟန်ချက်ညီ XLR စတီရီယို Analog စအသံသွင်းအားစု။
ပြည်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်အနက်ရောင်, အရောင်ဘားနှစ်ခုအရောင်မီးစက်နှင့်2မီဒီယာပလေယာလက်ငင်းပါဝင်သည်။
ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်မှုအတွက် Ethernet ချိတ်ဆက်မှု။ Mac နဲ့ Windows ကို control panel ဆော့ဖ်ဝဲပါဝင်သည်။
အားလုံး ATEM အသံလွှင့် Control Panel များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့။
Black ကဘက်စနှင့် HDကြီးမားသောစနစ်များသို့ပေါင်းစည်းမှုများအတွက် -Tri-Sync ကို genlock input ကို။
အဆိုပါ ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို Pro ကို HD အတွက်ရရှိနိုင် အမေရိကန် $ 2,295 များအတွက်မေလ နှင့်မှာသရုပ်ပြပါလိမ့်မည် Blackmagic ဒီဇိုင်း မှာတည်ရှိပါတယ် NAB 2017 တဲ #SL216.
အသစ်ဖွင့်လှစ် protocol ကို ဝေးလံခေါင်သီ Bluetooth ကိုကင်မရာထိန်းချုပ်ရေး အဆိုပါ URSA MiniPro ကင်မရာလက်ရှိနှင့်မကြာမီစားသုံးသူ buzzing ခံရဖို့ရှိပါတယ်! အခုတော့အသုံးပြုသူများကိုအပြည့်အဝသူတို့ရဲ့အိုင်ပက်, မိုဘိုင်း, နှင့် laptop နှင့်အတူပေါ်မှာခလုတ်တစ်ခုထိနှင့်အတူအပေါငျးတို့သပြည်တွင်းရေးကင်မရာ application များလုပ်ကိုင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူများအပယ်သွား 30feet မှအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားတက်ဖြစ်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဒီ app, ဒစ်ဂျစ်တယ် slate ၏ဖန်တီးမှုအဘို့အမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ငြိမ်ဝပ်၏အကြီးမြတ်ဆုံးနှင့်အတူထုံးစံကင်မရာထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းဖြေရှင်းချက်အားလုံးတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်အချက်အလက်များနှင့်အသုံးပြုသူများကိုယူပစ်ခတ်!
"URSA Mini ကို Pro ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကအလွန်ကောင်းစွာလက်ခံရရှိထားပြီး" Grant ကအသေးသုံးငွေကပြောပါတယ်, Blackmagic ဒီဇိုင်း စီအီးအို. "Customer များ, အထုတ်လွှင့်အင်္ဂါရပ်တွေနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှစ်သက်သောအဲန်ဒီ built-in filter များနှင့်လဲလှယ်မှန်ဘီလူး mount ။ ဖောက်သည်ကိုသူတို့အသစ်က Bluetooth ကိုထောက်ခံကြောင်းကို အသုံးပြု. မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းလုံးဝထုံးစံအဝေးထိန်းဖြေရှင်းချက်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည့် tools များရှိသည်သွားကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်ယခု, ဖြစ်နိုင်ခြေအမှန်တကယ်အဆုံးမဲ့များမှာ! "
အဆိုပါ protocol ကိုမှာသရုပ်ပြလျက်ရှိသည် #NABShow 2017, API နှင့်နမူနာကုဒ်နှင့်အတူဖောက်သည်လွှတ်ပေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ် ဇွန်လ 2017 အတွက်တာဝန်ခံအခမဲ့.
၏ကြေငြာချက် H.4 နှင့်အတူယခု Blackmagic မိတ္တူပွား 264K ဖောက်သည် 264K မိတ္တူပွားရန်လက်ရှိအချိန် H.4 encoding က staight အတွက်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ 1.1 update ကိုအခမဲ့ download ပြုလုပ်ယခုရရှိနိုင်ပါ! အဆိုပါ Blackmagic မိတ္တူပွား 4K သိသိသာသာမြန်ဆန်လွယ်ကူသောထုတ်လုပ်မှုပုံတူများ၏ဒေသများရှိတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်ထုတ်လုပ်မှုအရောင်းဝင်ငွေတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
"Blackmagic မိတ္တူပွား 4K, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်များမှာသူတို့ပြီးအောင်ယခုအချိန်တွင်အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေစေသည်" Grant ကအသေးသုံးငွေ, CEO ဖြစ်သူကပြောပါတယ်, Blackmagic ဒီဇိုင်း. ဒါကြောင့်အစဉ်အဆက်ထက် ပို. ပင်ပြန်ဖွင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူ Blackmagic မိတ္တူပွား 264K သဟဇာတစေသည်ဖြစ်သောကြောင့် "H.4 ၏ထို့အပြင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ဖောက်သည်များကသူတို့ရဲ့ content တွေကိုဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ရောင်းဘို့အပိုကြီးတဲ့ပရိသတ်ကိုပေးသည်! "
တစ်ပြိုင်တည်းတစ်ကြိမ်တည်းမှာမျိုးစုံကတ်များပေါ်သို့မှတ်တမ်းတင်ဘို့ 25 SD ကဒ်အသံဖမျး။
က Ultra များအတွက်စံဖြစ်သောလက်ရှိအချိန် H.264 သို့မဟုတ် H.265 encoding ကနည်းပညာ HD.
သည် RS-12 ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ 422G-SDI output ကို thru input ကိုနှင့်ကွင်းဆက်။
ကွန်ပျူတာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းပွင့်လင်းစံဖိုင် Format ကိုအသုံးပြုသည်နှင့် က Ultra HD ရုပ်မြင်သံကြား။
လူအပေါင်းတို့ SD ကမှတ်တမ်းတင် HD နှင့် က Ultra HD 2160p60 မှတက်ကို formats ။
မျိုးစုံမိတ္တူပွားအတူတကွ chaining daisy အားဖြင့်စံချိန်န့်အသတ်ကတ်များ။
ရပ်တန့်, append, သော့ခတ်နှင့်အတူစံချိန်ရှေ့ panel ကိုထိန်းချုပ်မှုကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးဝေးလံခေါင်သီခလုတ်။
တစ်လောကလုံး 110V built-in - 240V AC ပါဝါထောက်ပံ့ရေး။
ပိုပြီးဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြေရှင်းနည်းများ, Don '' လွဲချော်မှုအတွက် Blackmagic ဒီဇိုင်း at #NABShow တဲမှာ 2017 #SL216!
အကြောင်းအရာ Blackmagic ဒီဇိုင်း:
NAB ပြရန်ဧပြီလ 22-27 ကျင်းပ, Las Vegas မှာ 2017, အဆိုပါတွေ့တယ် Effect, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာများ၏ဆုံလွှမ်းခြုံကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုဖြစ်ပါတယ်။ 103,000 နိုင်ငံများနှင့် 166 + ပြသခဲ့သည်ထံမှ 1,700 တက်ရောက်နှင့်အတူ, NAB ပြရန် ရိုးရာအသံလွှင့်လုပ်ဆောင်ရမှာတွေနှင့်နည်းလမ်းအသစ်များကိုအသစ်ဖန်သားပြင်မှအကြောင်းအရာများပေးပို့လက်ခံကြောင်းဖြေရှင်းချက်များအတွက်အဆုံးစွန်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်ဆင်းခြင်း မှစ. စားသုံးမှုရန်, မျိုးစုံပလက်ဖောင်းနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောလူမျိုးများကိုဖြတ်ပြီး, NAB ပြရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမြော်အမြင်အသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နည်းလမ်းတွေနဲ့ဘဝမှအကြောင်းအရာများကိုရောက်စေဖို့ကျင်းပရမည်ဘယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံသောအသေးစိတ်ခရီးစဉ် www.nabshow.com.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး post ကိုထုတ်လုပ်မှု 2017-04-26
ယခင်: Calrec အဆိုပါ 8 NAB Show မှာ V2017 နှင့်အတူအပြည့်အဝအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကိုတိုင်တန်း
နောက်တစ်ခု: Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub မှအဆင့်မြှင့်မှုများကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်